Tandapa sy Mpiandry Ondry Fahiny | Fantatrao Ve?
FANTARO IZAY LAZAIN’NY BAIBOLY Ry Lehilahy, Aza Mampijaly Vady
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Kwangali Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Maya Mongol Mooré Ngabere Norvezianina Nyaneka Nzema Népali Ossète Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tatar Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Vietnamianina Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Inona no dikan’ilay hoe “eonoka” na “tandapa” ao amin’ny Baiboly?
Sary Asyrianina ahitana Tandapa
Iantsoana olona novosirina io teny io indraindray, ao amin’ny Baiboly. Nisy lehilahy novosirina tokoa fahiny rehefa nosazina na rehefa lasa andevo na azo babo. Lehilahy novosirina azo natokisana no nasaina niambina ny tranom-behivavy tao an-dapan’ny mpanjaka. Anisan’izany i Hegay sy Sasegaza. Izy ireo no mpiambina an’ireo vady sy vadikelin’i Ahasoerosy mpanjaka persianina. Io Ahasoerosy io angamba ilay mpanjaka nantsoina hoe Ksersesy I.—Estera 2:3, 14, Fandikan-teny Katolika.
Tsy voatery hidika foana hoe lehilahy novosirina anefa ilay teny. Midika hoe olona ambony ao an-dapan’ny mpanjaka koa izy io, araka ny fanazavan’ny manam-pahaizana sasany. Toa tsy lehilahy novosirina, ohatra, i Ebeda-meleka, naman’i Jeremia, fa olona ambony tao an-dapa satria afaka nifanerasera akaiky tamin’i Zedekia Mpanjaka. (Jeremia 38:7, 8, Kat.) Toy izany koa ilay Etiopianina nitorian’i Filipo. Lazain’ny Baiboly hoe niandraikitra ny harenan’ny mpanjaka izy io, ary “nankany Jerosalema mba hivavaka.”—Asan’ny Apostoly 8:27.
Nahoana ny mpiandry ondry fahiny no nanasaraka ny ondry sy ny osy?
Hoy i Jesosy rehefa niresaka momba ny andro fitsarana amin’ny hoavy: ‘Rehefa tonga ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, dia hanavaka ny olona izy, toy ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin’ny osy.’ (Matio 25:31, 32) Nahoana ny mpiandry ondry fahiny no nanasaraka ny ondry sy ny osy?
Navela hiara-miraoka ahitra mazàna ny ondry sy osy mandritra ny andro. Nangonina tao anaty vala kosa izy ireo rehefa alina mba hiarovana azy amin’ny bibidia sy ny mpangalatra ary ny hatsiaka. (Genesisy 30:32, 33; 31:38-40) Nosarahina ny valan’ny ondry sy ny osy. Malemy paika mantsy ny ondry fa mahery setra kosa ny osy, ka atahorana hamely ny ondry, indrindra fa ny ondrivavy sy ny zanak’ondry. Nosarahin’ny mpiandry koa ny ondry sy ny osy rehefa “miteraka sy mampinono ary mihety”, araka ny boky Ny Zava-drehetra ao Amin’ny Baiboly (anglisy). Nampiasa fanoharana nahazatra ny olona tany Israely fahiny àry i Jesosy, satria mpiompy ondry aman’osy ny mponina tany.
Inona avy ny biby andrasan’ny mpiandry, ary inona avy ny asany?